daawada xoolaha, saarayaasha, qeybiyeyaasha - Warshadda daawada xoolaha ee Shiinaha
Ivermectin qulqulka 0.08%
Ivermectin wrench 0.08% ISKU DAR: Waxay ka kooban tahay halkii ml. : Ivermectin …………………………… .. 0.8 mg. Xalka xalka ………………………… .. 1 ml. SHARAXA: Ivermectin waxaa iska leh kooxda avermectins waxayna ka hortagtaa dirxiga iyo dulinka. TILMAAMAHA: Daaweynta caloosha iyo mindhicirka, injirta, samaynta sambabada, oestriasis iyo isnadaamiska. Trichostrongylus, Cooperia, Ostertagia, Haemonchus ...
Toltrazuril 2.5% Xalka afka
Xalka afka ee Toltrazuril 2.5% ISKU DAR: Waxay ka kooban tahay ml: Toltrazuril ………………………………………… 25 mg. Xayeysiinta xallinta ………………………………… 1 ml. SHARAXAAD: Toltrazuril waa daawada xinjirowga lidka ku ah oo ka dhan ah Eimeria spp. digaagga: - Eimeria acervulina, brunetti, maxima, mitis, necatrix iyo tenella digaagga. - Eimeria adenoides, galloparonis iyo ...
Ivermectine 1.87% dhaji
Halabuurka: (6,42 gr kasta oo dhejis ah ayaa ku jira)
Ka -faa'iideystayaasha csp: 6,42 g.
Cajalado yaryar oo xoog leh (Cyatostomun spp., Cylicocyclus spp., Cylicodontophorus spp., Cylcostephanus spp., Gyalocephalus spp.) Foomka bislaaday iyo qaangaadhka Oxyuris equi.
Parascaris equorum (qaab qaangaadh ah iyo dirxi).
Trichostrongylus axei (qaab bisil).
Dictyocaulus arnfieldi (dulinka sambabka).
Neomycin sulphate 70% budada biyaha ah
Neomycin sulphate 70% budada biyaha lagu milmi karo WAXYAABAHA: Waxaa ku jira garaam kasta: Neomycin sulphate …………………… .70 mg. Xayeysiiska side …………………………………………… .1 g. SHARAXA: Neomycin waa bakteeriyada bakteeriyada aminoglycosidic bakteeriyada leh oo leh hawl gaar ah oo ka dhan ah xubnaha Enterobacteriaceae sida Escherichia coli. Qaabka ay wax u qabato waa heer ribosomal. ...
Albendazole 2.5%/10% xalka afka
Albendazole 2.5% xalka afka ah DHISKA: Waxay ka kooban tahay ml: Albendazole ……………… .. 25 mg Solvents ad ……………………. -waxyeeleyaal leh waxqabad ka soo horjeeda dixiriga ballaaran iyo heerka qiyaasta sare sidoo kale ka soo horjeeda marxaladaha qaangaarka ee ifilada beerka. TILMAAMAHA: Ka -hortagga iyo daweynta jeermisyada ku dhaca weylaha, lo'da, riyaha iyo idaha sida: Gooryaanka caloosha: Bunostomu ...
gentamicin sulphate10% +doxycycline hyclate 5% wps Halabuurka: budada gram kasta waxaa ku jira: 100 mg gentamicin sulphate iyo 50 mg doxycycline hyclate. Spectrum of activity: Gentamicin waa antibiyootiko ka tirsan kooxda amino glycosides. Waxay leedahay wax-qabad bakteeriyadeed oo ka dhan ah bakteeriyada Gram-positive iyo Gramnegative (oo ay ku jiraan: Pseudomonas spp., Klebsiella spp., Enterobacter spp., Serratia spp., E. coli, Proteus spp., Salmonella spp., Staphylococci). Intaas waxaa sii dheer waxay firfircoon tahay Campyl ...
Tetramisole 10% Budo Biyaha Buuxisa
Budada Tetramisole Powder 10% ISKU DARAN: 1 garaam kasta waxaa ku jira tetramisole hydrochloride 100mg. SHARAXA: Budada kristaliin cad. FARMAAJO: Tetramisole waa anthelmintic oo lagu daaweeyo nematodes badan, gaar ahaan firfircoon oo ka dhan ah nematodes -ka xiidmaha. Waxay curyaamisaa dirxiga u nugul iyada oo kicisa ganglia nematode. Tetramisole si dhakhso ah ayuu u nuugaa dhiiga, wuxuuna ka soo baxaa saxarada iyo kaadida dhaqso. TILMAAMAHA: Tetramisole 10% waxay wax ku ool u tahay daaweynta ascariasis, ho ...
Albendazole 2500 mg Halabuurka Bolus: Waxay ka kooban tahay bolus: Albendazole …………………………………………… .. 2500 mg Sharaxaad: Albendazole waa dawooyinka lidka-macmalka ah ee iska leh kooxda benzimidazole Gooryaanka baaxadda leh iyo heerka qiyaasta sare sidoo kale ka soo horjeeda heerarka qaangaarka ee ifilada beerka. Tilmaamaha: Ka -hortagga iyo daaweynta ka -soo -baxyada dillaaca ee weylaha iyo lo'da sida: G ...
Metamizole sodium 30% duritaan
Duritaanka sodium Metamizole 30% ml kasta waxaa ku jira Metamizole sodium 300 mg. SHARAXA Xal cad oo aan midab lahayn ama huruud ah waxoogaa u muuqda xalal madhalays ah TILMAAMAHA Catarrhal-spasmatic colic, meteorism iyo calool-fadhiga caloosha ee fardaha; dillaacyada afka ilmo -galeenka ilmo -galeenka xilliga dhalmada; xanuunka kaadida iyo kaadida neuralgia iyo nevritis; furitaanka caloosha oo ba'an, oo ay weheliyaan weerarada caloosha oo daran, si loo yareeyo xanaaqa xayawaanka loona diyaariyo caloosha ...
Dexamethasone 0.4% duritaan
Duritaanka Dexamethasone 0.4% DHEXDIISA: Waxaa ku jira halkii ml: Saldhigga Dexamethasone ………. 4 mg. Xayeysiinta xallinta …………………… .1 ml. SHARAXA: Dexamethasone waa glucocorticosteroid oo leh falcelin xoog leh, ka-hortagga xasaasiyadda iyo gluconeogenetic. TILMAAMAHA: Dhiig -yaraanta Acetone, xasaasiyad, arthritis, bursitis, shoog, iyo tendovaginitis ee weylaha, bisadaha, lo'da, eeyaha, riyaha, idaha iyo doofaarka. DHIBAATOOYINKA Haddii aan ilmo iska soo ridid ​​ama ka-tegis hore loo baahnayn, maamulka Glucortin-20 intii lagu jiray ...
Florfenicol 30% duritaan
Duritaanka Florfenicol 30% ISKU DAR: Waxay ka kooban tahay halkii ml.: Florfenicol …………… 300 mg. Xayeysiisyada kaabayaasha ………… .1 ml. Qeexitaan: Florfenicol waa antibiyootiko ballaadhan oo isku-dhafan oo wax-ku-ool ah oo ka dhan ah inta badan bakteeriyada Gram-positive iyo Gram-negative-ka laga soocay xayawaanka guriga. Florfenicol wuxuu u dhaqmaa isagoo ka hortaga isku -darka borotiinka ee heerka ribosomal waana bakteeriyo. Baadhitaannada shaybaadhka ayaa muujiyey in florfenicol ay ka firfircoon tahay jeermisyada bakteeriyada ee inta badan go'doonsan ee ku lug leh ...
Birta Dextran 20% duritaan
Birta Dextran 20% DHAQANKA: Waxaa ku jira halkii ml .: Birta (sida birta dextran) ………………………………………… .. 200 mg. Fiitamiin B12, cyanocobalamin ……………………… 200 ug Sol solvents ad. ……………………………………………………………… 1 ml. SHARAXA: Dextran birta waxaa loo isticmaalaa ka hortagga ...